I-foam yasolwandle: yakha kanjani futhi kungani ibonakala | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Impela sekungaphezu kwesisodwa uye olwandle wabuka amagagasi. Uqaphele ukuthi kwesinye isikhathi kuba nokuningi Igwebu lolwandle kunokujwayelekile futhi kwesinye isikhathi akunjalo. Kumayelana nani lokhu? Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi izinto eziningana ezihlanganisiwe zingenza amagagasi afike ngokulambisa ogwini ngogwebu, kanti kwezinye izikhathi kunogwebu oluningi olubukeka njengamanzi asemshini wokuwasha.
Kule ndatshana sizokuchazela ukuthi yiziphi izinto ezenza amagwebu olwandle abe maningi kakhulu noma cha.
1 I-foam yasolwandle nezici
2 I-anecdote yosuku olukhazimulayo
3 Ezinye izinto ezakha amagwebu olwandle
4 Amacala namuhla
I-foam yasolwandle nezici
IMeerschaum iyafana nokubukeka kukabhiya. Impela uzwile kaningi ukuthi lapho amanzi enamagwebu, angcolile. Lokhu kuvame kakhulu ukuzwa futhi kuyinto ehlobene. Akukho mehluko omkhulu ekwakhiweni kwamanzi ahlukene olwandle ukuthi siku- izilwandle nezilwandle. Ngakho-ke, i-foam inesinye isizathu sokuba.
Lawa ngamabhamuza omoya avela lapho amanzi enyakaziswa umoya. Uma sinokuvuvukala okunamandla ngenxa yejubane eliphezulu umoya ovunguza ngalo, kungenzeka kakhulu ukuthi amanzi anogwebu oluningi. Ngokuphambene nalokho, uma siya olwandle futhi amanzi ezolile, sizobona igwebu kuphela lapho igagasi liphuka ogwini. Uma ufuna ukubheka lokhu ekhaya, vele unyakazise ingilazi yamanzi ngesipuni uzobona ukuthi lapho uqhaqhazela kunamandla, uzobona amagwebu noma amagwebu. I-foam enjalo ngeke uyibone ngamanzi ompompi, kodwa uzobona amagwebu ashukumisayo.
Ukwehla kwamazinga okushisa olwandle, igwebu lihlala isikhathi eside. Akusona isibonakaliso sokuqala, ngoba kuncike kwezinye izinto eziningi, kepha ungathola umbono wokuthi amanzi azoba kanjani kuye ngogwebu analo. Lokhu kungenxa yokuthi amagesi ngeke abalekele emkhathini ngendlela efanayo noma ngejubane elikhulu njengalapho ilanga selishisa.
I-anecdote yosuku olukhazimulayo
Ngenxa yalokhu esikushilo ngethempelesha, kune-anecdote eyenzeka ngo-2014 ngosuku lwama-retes eGalicia. Amagagasi afinyelela ubude obungamamitha ayi-10 ukuphakama, ngakho umoya owawuphephetha wawenza waba namandla kakhulu. Kulapho kwakukhona iphuzu lokuthi amagagasi ayenamandla kakhulu, ulwandle lunolaka kanye nezinga lokushisa liphansi kakhulu, ukuthi inani logwebu lolwandle olakhishwa lamboza amashumi amakhilomitha amaningi.
Yize kumane nje kuwugwebu, lo mcimbi ukhiqize ukushona kwelanga okuhle nomcimbi omuhle impela. Ukube bekusezingeni lokushisa eliphakeme kakhulu, lokhu bekungeke kwenzeke, ngoba amagesi akha amagwebu ngabe angene emkhathini ngaphambi kwesikhathi ngenxa yesenzo samazinga okushisa. Masingakhohlwa ukuthi umoya ofudumele awuminyene kangako, ngakho-ke uvama ukukhuphuka futhi indawo yawo ithathelwe umoya opholile.
Ezinye izinto ezakha amagwebu olwandle
Esinye isici esinomthelela kulugwebu lolwandle ngokusobala ukungcoliswa kwezinto eziphilayo. Ukuchitheka okulayishwe ngomanyolo, okokuhlanza kanye nomquba kulungele ukukhiqiza inani eliningi lamagwebu futhi kunokuphazamiseka okuncane kakhulu kunogwebu lwemvelo. Lapho amanzi angcoliswe ngala makhemikhali enyakaziswa amagagasi, imvamisa kubangela inani elikhulu legwebu. Isikhathi esifanayo, futhi sincike ekushiseni kwezemvelo, izinga lokushisa kwamanzi kanye nokuhlushwa kokungcola ngaleso sikhathi. Kuyafana nokuthela umshini wokuwasha izitsha engilazini yamanzi ekhaya bese uyivuthulula ngesipuni. Ngokuya ngokuhlanjululwa komshini wokuwasha izitsha, kuzokwenziwa igwebu elingaphezulu noma elincane.
Ngakolunye uhlangothi, ukutholakala kokungcola okungafani kwezinto eziphilayo emanzini kudala ukwanda kwamagciwane amaningi enza amanzi abe maningi. Njengoba lezi zinambuzane ziphindaphindeka, kunezelwa amakhemikhali avela ekugayekeni komzimba wawo. Lokhu kwenza ukuthi igwebu lihlale isikhathi eside (kuguqule ukuminyana kwamanzi). Ngaphezu kwalokho, lapho la makhemikhali eguqula ukumelana namanzi okuthi amagesi angashiyi ingxenye ewuketshezi, kudala lokho akukho oxygenation enhle emvelweni. Ngokungenayo i-oxygen eyanele emanzini, izinto eziningi eziphilayo ezikulo ziyalimala futhi zilimale.
Zonke lezi zimo zisho ukuthi, kabi, imvelo yasolwandle yonakele ngokuphelele. Yile ndlela ukungcola okuthinta ngayo kabi amanzi.
Lezi zimo zenzeka kaningi e-Australia. Uma lokhu kwenzeka, amabhishi ambozwa ngogwebu isikhathi esithile. Lesi sigwebu sibangelwa ukungcola okweqile nokungokwemvelo. Uma siqhathanisa igwebu lekesi laseGalician nelase-Australia, siyabona ukuthi ukubukeka kuhlukile. Ngenkathi lokho kweGalicia kubonakala kungokwemvelo ngokwengeziwe, lena ese-Australia ibukeka njengogwebu kusuka lapho sibheka umshini wokuwasha ngenkathi siwasha.
Njengokulangazelela, kukhona okumbiwa phansi emhlabeni okwaziwa njengogwebu lolwandle. Leli gama linikezwe ngenxa yombala omhlophe nokufana kwalo negwebu. Phambilini le minerali yayisetshenziselwa ukwakhiwa kwamapayipi okubhema. SKuyinto ehlukahlukene ye-sepiolite futhi ilusizo impela lapho kunokuchitheka kukawoyela olwandle. Lokhu kungenxa yezinto zayo zokumunca eziphakeme ezingakwazi ukugcina okuningi kokuchitheka bese zikukhipha. Kunjengokungathi sisebenzise isiponji lapho sichitha okuthile phansi ukumunca uketshezi. Kuyasiza nokuthi uwoyela ofanayo ungafinyeleli ezansi kolwandle, okwenza umonakalo ezimileni nasezilwaneni ezikhona.
Njengoba ukwazi ukubona, igwebu lolwandle linomsuka nencazelo yalo. Ngale ndlela, lapho ngokuzayo lapho uya olwandle ubona ukuthi ulwandle lunamagwebu amaningi, uzokwazi ukuhlaziya kangcono ukuthi siyini isizathu salokho.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Igwebu lolwandle
U-Enrique de Costa Ruiz kusho
Zonke lezi yizaba zokujabulisa osopolitiki, izizathu ezibalulwe, uma zingokwemvelo, bezizokwenzeka njalo: Ngineminyaka engama-73 ubudala futhi ngisemncane ngachitha izinyanga ezintathu ngiseholidini edolobheni elincane laseCastellón, ngibone amagagasi amakhulu futhi ngiwajabulele olwandle , kodwa ANGIKE ngibone lezo zinqwaba zamagwebu, okuwukuphela kwento eshintshile ukungcoliswa kolwandle, ukuthi yi-emulsion yikho okubangela igwebu, ezinye izizathu zivela kancane futhi ziyivelakancane. Angisoze ngavumela abazukulu bami ukuba bageze kulolo gwebu oluyingozi.
Phendula u-Enrique de Costa Ruiz